ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/17/12
happy birthday အမေစု
မင့်မိုရ်တောင်မက ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ အမေ "ဒေါ်စု" ကို ငါတို့ ဘယ်လိုကျေးဇူးဆပ်ရမလည်း။
တိုင်းပြည်ပေါ် သစ္စာရှိပြီး ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နှင့် ဘာသာ ၃ ဘာသာလေးစားမယ်ဆိုရင် အမေ ကျေနပ်မှာပါ။
၆၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အ တွက် ဖန်တီးတင်ဆက် သည် ..ဝိုင်ချိုမြစ် ရဲ့အမေစု အတွက် သီဆို ထားသော အ လွန်ကောင်းသော သီချင်းဖြစ်ပါတယ်....သီချင်းနာမည် ကို သိသူများပြော ပေးပါရန်မေတ္တာ ၇ပ်ခံပါတယ်...
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:34 PM No comments:
ဝီရသူ သဘောထား (၆/၇၄) by Ashin Vicittabhivamsa on Friday, June 15, 2012 at 11:48pm ·
၁၃၇၄-ခု၊ နယုန်လ္ဆုတ်(၁၁)ရက်။ ၁၅.၆.၂၀၁၂-သောကြာနေ့။
မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်း နာယက၊
ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ၊ အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)အပေါ် လူမှုရေးပုဒ်မတပ်၍
တားမြစ်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထား မှန်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ
(က) အရှင်ဝီရသူ ဦးစီး၍ အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမှာ ဆုတောင်းပွဲ ကျင်းပစဉ်က အရှင်ဝီရသူအား
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရှင်ဝီရသူက မိမိ၏
သဘောထားများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အခါ၌မူ အရှင်ဝီရသူအား လူမှုရေးပုဒ်မတပ်၍
တားမြစ်နိုင်ရေး အတွက် အာဏာသုံး၍ မတရားအမိန့်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကိုလည်း
(ခ) အမိန့်အာဏာများကို ခွဲခြမ်းဝေဖန် ကြည့်ပါက လိုက်နာနိုင်သည့်
အပိုင်းနှင့် အလိုက်နာနိုင်သည့် အပိုင်းဟူ၍ နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။
အရှင်ဝီရသူသည် “ခွင့်တောင်းပြီးမှ သင်္ကန်းဝတ်ရေး”အမိန့်ကို
မတရားမှန်း သိသော်လည်း လိုက်နာနိုင်သည့် အပိုင်းဖြစ်၍ လိုက်နာခဲ့ပေသည်။
ယခုအမိန့်ကား မတရားသော အမိန့် ဖြစ်နေ၍ လိုက်နာနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
(ဂ) ၎င်းတို့ စွပ်စွဲသော လူမှုရေးပုဒ်မသည်လည်း ယုတ္တိမဲ့ နေသည်ကို
တွေ့ရပေသည်။ အရှင်ဝီရသူ၏ သဘောထားများတွင် လူမှုရေးများ မပါဝင်ခဲ့ပါ။
အမျိုးသားရေး သဘောထားများသာ ဖြစ်ပါသည်။
အမိန့်ထုတ်ပြန်သော တိုင်းသံဃနာယက ကိုယ်တိုင်က လူမှုရေးနှင့်
အမျိုးသားရေး ခွဲခြားတတ်ပုံ မပေါ်ပါ။
(ဃ) အမျိုးသားရေးဟူသည် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ
လူမျိုးနွယ်စုပင် ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်စုပင် ဖြစ်စေ၊ဲ
အမျိုးသားထုကို ကိုယ်စားပြုသည့် လုပ်ငန်းများကို ခေါ်ဆိုပေသည်။
အမျိုးသားရေးသည် လောကတ္ထစရိယ၊ ဉာတတ္ထစရိယ၊ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယဟူသော
စရိယသုံးပါးတွင် ဉာတတ္ထစရိယတွင် ပါဝင်ပေသည်။ ဉာတတ္ထစရိယဟူသည်
ဘုရားလောင်းတို့ လျှောက်လှမ်းသော ပါရမီလမ်းစဉ် ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရား
ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်သုံးတော်မူခဲ့သော လမ်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
ဉာတတ္ထစရိယနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောကြားတော်မူသော ဇာတ်တော်များလည်း
များစွာရှိပေသည်။ ကျီးမင်းဇာတ်၊ ဝက်မင်းဇာတ်၊ ကြွက်မင်းဇာတ်တို့မှာ
သာကီဝင်မင်းမျိုးကို ဝိဍဍူဘက လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မည့် အရေးမှာ
ဘုရားကိုယ်တိုင် သုံးကြိမ်သုံးခါ ကြွတော်မူ၍ ကာကွယ်ပေးခဲ့ ဖူးပေသည်။
(င) မဟန-၏ ညွှန်ကြားချက်များသည်သာ ထေရဝါဒ ပိဋကတ်တော်လာ ဓမ္မဝိနယနှင့်
ညီညွတ်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာ့ပြည်သူရော ကမ္ဘာ့ပြည်သူကပါ လေးစားကြည်ညိုမည်
ဖြစ်ပေသည်။ မြန်မာပြည်သူတို့သည်လည်း မဟနကို အကြောင်းပြု၍ ကမ္ဘာမှာ
မဟန၏ ညွှန်ကြားချက်များအနက် ဓမ္မဝိနယနှင့် မညီညွတ်သည့်
စစ်အစိုးရလက်ထက်မှ ဓားမိုးရေဆွဲခဲ့သော အဓမ္မ အဝိနယ ညွှန်ကြားချက်များကို
ဆက်လက်ကျင့်သုံးမှု မပြုခြင်း၊ လုံးဝဖျက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ဖို့အတွက်
ဥပမာ= သိက္ခာမချသေးသည့် လွတ်မြောက်ရဟန်းတော်များ
သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်တောင်းခံရမည့် ညွှန်ကြားချက်သည် ဝိနယဘောင်ကို
ကျော်လွန်နေပါသည်။ မဟနက ဘုရားထက်ပို၍ ဝိနည်းဓိုရ်သည်လား၊
ဘုရားဟောဝိနည်းကို မလေးစားသည်လား မေးစရာပင်။
ရခိုင်အမျိုးသား အရေးသည် တိုင်းရင်းသားများ အရေးဖြစ်၍
အနိုင်ကျင့်ခံ တိုင်းရင်းသားတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကို
ဉာတတ္ထစရိယမှန်း မသိခြင်းလော၊ ဘုရားလောင်း လမ်းစဉ်၊ ဘုရားရှင်လမ်းစဉ်ကို
မျက်ကွယ်ပြုခြင်းလော၊ စောကြောဖို့ရန် လိုအပ်လာပေသည်။
(စ) ထို့ကြောင့် အမျိုးသားရေးနှင့် လူမှုရေးကွဲပြားအောင် လေ့လာရမည်။
“ဘုရားထက်တစ်လကြီး အဖွဲ့စည်းမျိုး” မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
အာဏာရှင်လက်ထက်က ဓားမိုးရေးစွဲထားသော မတရားသည့် ဥပဒေများကို ပြုပြင်ရမည်။
သာသနာတော်တစ်ရပ်လုံး၊ သံဃာထုတစ်ရပ်လုံး၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက
လေးစားကြည်ညိုမှုကို ခံယူနိုင်သည့် သံဃာ့အဖွဲ့စည်း ကြီး ဖြစ်အောင်
ဆောင်ရွက်ဖို့သာ အရေးတကြီး လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
သင်္ကန်းပြန်လည် ဝတ်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလွှာ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:29 PM No comments:
ဒီမိုကရေစီ အစစ်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြရအောင်
. ဒီမိုကရေစီ အစစ်အတိုင်း
လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုကြရအောင် ...
ကျွန်တော်သိတဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို ပြောကြည့်တာပါ...
ယခု ပူပူနွေးနွေး နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရတားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က
ဒေါ်စုက တကယ့် ခေါင်းဆောင်ကာင်း ဖြစ်တယ်.. NLD ရဲ့ ပြည်သူ့ လည်ဆွဲ တန်ဆာပါ။ပြည်သူတွေ နဲ့ဘယ်တော့မှ မခွဲ မခွါပါ။ရဲဘော် တွေ နဲ့ သေအတူ ရှင်မကွာပါ။
သူက နှလုံးသားဖြူစင်တဲ့တကယ့်လူသား ကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စုမှာ သီလ ရှိတယ် စောင့်ထိန်းတယ်..မှန်ကန်တယ်။ဒေါ်စုမှာသိက္ခာ ရှိတယ် သစ္စာ ရှိတယ် သမာဓိရှိတယ်။တည်ကြည် တယ်..ဖြောင့်မတ်တယ်။
ဒေါ်စုမှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ မေတ္တာ ရှိတယ် ။အခုအသက်၆၇နှစ်ပြည့်မယ့်မွေးနေ့ ရှင်..ပါ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေသူလို့ မြင်မိပါတယ်။သူ့ အကြောင်း ကျွန်တော်မသိပါဘူး။
ဒေါ်စုက သမိုင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေသူလို့ ဘဲ ထင်မိပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ မတူညီတဲ့ အနေအထား မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့ အကြုံနဲ့
မြန်မာကို ကယ်တင်မယ့် သူတွေပါလို့ သင်ကောမြင်မိပါလား....
အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြာင့်...အကောင်းအဆိုးကိုပြောနေမယ့် အဖက်ဖက်ကနိမ့်ကြနေတဲ့ ဗမာပြည်ကို ဘယ်လိုကယ်တင်ကြရင် မကောင်းဘူးလားလို့ တွေးရင်းတွေးရင်း...စေတနာပြိုင်ကြရင်မကောင်းကြဘူးလား..။နားလည်မှုတွေ ပေးဆပ်မှုတွေ စာနာမှုတွေနဲ့ ပူပေါင်းကြရအောင် သင့်ကို မေးချင်ပါတယ်...အမှန်အတိုင်း သင်လဲ ၀င်ဆွေးနွေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ရင်း.....
( ရေးတာက တဖက်သတ်ဆန်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ...။)
ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ကို သနားနေတဲ့ သူတွေ သိစေဖို့
၁၄ ရက်နေ့က DVB က ပြည်တွင်းသတင်းထောက်ကျတော်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူး
လုပ်တယ်... ကျတော်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ယခုလက်ရှိ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုတွေ လုပ်နေသူတွေဟာ ပြည်
တွင်းနေ အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ နိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေသာ ဖြစ်
ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းထုတ် 7Day News လို ဂျာနယ်မှာတောင် ဘင်္ဂလီ လို့သုံးနှုန်းကြောင်း၊ ကျတော်လဲ
အင်တာဗျူး ဖြေရာမှာ ဘင်္ဂလီ (သို့) ရိုဟင်ဂျာ (သို့) ကုလား လို့သာ သုံးနှုန်းပေးနိုင်မယ် လို့ အင်တာဗျူး
မစခင် ကြိုပြောခဲ့တယ်... အင်တာဗျူးမှာ ကျတော်က ဘင်္ဂလီ လို့ သုံးပြီးဖြေလိုက်တဲ့အတွက် အဆိုပါ
အင်တာဗျူးကို ထုတ်လွှင့်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဆပ်အယ်ဒီတာ ဦးသန်းဝင်းထွဋ်က အကြောင်းကြားလာ
ကျတော်က စဉ်းစားတယ်၊ မီဒီယာဆိုတာဘာလဲ၊ အမျိုး.ဘာသာ.သာသနာ ကိုစောင့်
ရှောက်ရမယ့် ထိပ်တန်းအရေးပါသူတွေပဲ၊ ... ရှေးယခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နေလိုလလို ထွန်းတောက်ခဲ့
တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ယခုအခါ ကုလားဗလီတွေက လက်ညိုးထိုးမလွဲရှိနေပြီ၊ စစ်တွေမြို့မှာ ဒေသခံ
ရခိုင်တွေဟာ အင်မတန်တောင့်ခံနိုင်လို့သာ စစ်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ပါလားဆိုတဲ့ အ
သိရှိနိုင်သေးတာပါ... အစိုးရအပါအ၀င် ကျွမ်းကျင် သမိုင်းပညာရှင်တွေက ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့
ပြည်တွင်း စိမ့်ဝင်မှုနဲ့၊ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားနေပါရဲ့၊ မီဒီ
ယာတွေက ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ကို အကာအကွယ်ပေးနေတာလဲ...
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ လုံထိန်းတွေ၊ စွမ်းအားရှင် ကြံ့ဖွတ်တွေက ပတ်
လည်ဝိုင်းထားတဲ့ ကြားက အသက်လုပြေးခဲ့တဲ့ အချိန်က ခံစားမှုထက်ပိုတဲ့ ရင်နာမှုကို ခံစားရတယ်.
.. ၂၀၀၇ က ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို တည့်တည့်ချိန်ပစ်ခဲ့တဲ့ သေနပ်တွေဟာ မိုးပေါ်ကို ကျည် အချက်
ပေါင်းများစွာ ပစ်ဖောက်နေတယ်... မည်းမည်းလှုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ စစ်တွေမြို့ပြင်
မှာ နှစ်သိန်းကျော် ရှိနေတယ်... စစ်တွေ မြို့သားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မိသားစု အသုဘတွေကိုတောင်
စစ်တွေမြို့ပြင် မန်စီသချိုင်းကို သွားမပို့ရဲကြဘဲ ရှိနေတယ်... ဒါတွေကို ကျတော် သွေးထိုးတဲ့ အ
နေနဲ့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး... အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် ပြောတာပါ...
အားလုံးရဲ့ အမြင်မှာ တုတ်တွေ၊ ဒါးတွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို
ကိုယ်တိုင်မျက်မြင် မဟုတ်ဘဲ ဓါတ်ပုံအနေနဲ့ တွေခဲ့ရင် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သနားစရာ အဖြစ်
မြင်ကြမယ်... တကယ်တော့ ဘာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှ မရှိဘဲ အသေအကျေပေါင်းများစွာနဲ့ အထိနာ
ခဲ့ရတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေပါ... ဒေသခံရခိုင်တွေရဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကြားထဲမှာ ဘင်္ဂလီ ရို
ဟင်ဂျာတွေက တဲထိုးပြီးနေကြပါတယ်၊ ကြာလာတော့ ရခိုင်ရပ်ကွက်ကြီးတွေထဲ၊ ရွာကြီးတွေထဲ
မှာ ဘင်္ဂလီတွေက ကွက်ကြားသဘောမျိုး သုံးလေးအိမ်စ နေရာတိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ရှိနေ
အခု ပြသနာတွေ ဖြစ်ပွားချိန်မှာတော့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စုတ်ပြတ်
နေတဲ့ နေအိမ်တွေကို ဆီအပြည့်နဲ့ မီးတိုက်ပစ်လိုက်တယ်... ဒီအခါမှာ ရခိုင်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း၊
ရပ်ကွက်ကြီး၊ ရွာကြီးတွေဟာ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ပြီး ပြာအတိဖြစ်သွားတော့တာပဲ... ဘင်္ဂလီ
တွေ နေတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ၊ ရွာတွေကတော့ လုံခြုံပါတယ်... စစ်တပ်
ကလဲ လုံခြုံရေးအပြည့် ယူပေးထားပါတယ်... ကျတော် ဒီစကားတွေကို အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသ
နာ အတွက် ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါ... ဘင်္ဂလီကုလားကို ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် သနားနေသေးတဲ့
Friend ရှိနေခဲ့ရင် ဘလော့ပါရစေ... ကျတော်ကတော့ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာ ကို မသနားဘူးဗျို့...
ကျတော် ၁၁ရက်နေ့က စစ်တွေကို စရောက်ရောက်ချင်း ရခိုင်အကို တစ်ယောက်
က စာရွက် တစ်ရွက်ပေးတယ်... အဲ့ဒီစာရွက်ရှေ့မှာတော့ အမေစု က ရန်ကုန်က အစ္စလမ် သုံး
ယောက်ကို နှစ်သိမ့်မှုပေးနေတဲ့ ပုံပါ... မြင်ဖူးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပေမယ့် ဘာကြောင့် ဒီပုံဖြစ်
လာလဲဆိုတာတော့ သိသူနည်းပါလိမ့်မယ်... အဲ့ဒီနေ့က ထိုင်းအတွေ့အကြုံ သတင်းစာရှင်းပွဲ
လုပ်ပါတယ်... ပွဲအပြီး အမေ ပြန်အထွက်မှာ အဆိုပါ သုံးယောက်က အမေ့ရှေ့က ပိတ်ရပ်ပြီး
လက်အုပ်ချီ နှုတ်ဆက်တော့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံပါ... ကိုယ့်ရှေ့လာပြီး လက်အုပ်ချီတဲ့ သူကို အဲ့
လို ပုံမှာတွေ့တဲ့ ပြန်မနှုတ်ဆက်ဘဲ မောင်းထုတ်ရမလားးဗျာ... ပြန်ပြီး နှုတ်ဆက်တာပေါ့...
စစ်တွေမှာတော့ အဲ့ဒီပုံကို မိတ္တူဆွဲပြီး ရပ်ကွက်တွေထဲ ဖြန့်ဝေကာ ဘင်္ဂလီတွေ
ဘက်မှာ အမေစု က ရှိနေရပ်နေသလို ပုံဖမ်းထားတော့ ရခိုင်အားလုံးက သေချာ ဂဂဏဏ မသိ
ဘဲ အမေ့ကို မုန်းနေကြတယ်... တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လူမျိုးခြား စိမ့်ဝင်
မှုတွေကြောင့် ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှု တွေ ဖြစ်ရတာပါ... ဘင်္ဂလီတွေက ဘယ်လောက်ငွေ
ပေးပေး လက်မခံဘဲ မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တာကို ငြင်းပယ်တဲ့ လူဝင်မှုအရာရှိ
တွေသာ နယ်စပ်မှာ ရှိနေခဲ့ရင် ဒီလိုပြသနာမျိုး ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး... အမျိုးတူ၊ ဘာသာ
တူ သူ့နိုင်ငံက လူတွေ ဖြစ်ပါ ရက်နဲ့တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာကို လက်မခံပါ
ဘူး...ဒါကို ကျတော့ ဘယ်မီဒီယာမှ မပါဘူး... ရင်နာတယ်...
Ko MawPyay on Saturday, June 16, 2012 at 8:17pm ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:53 AM2comments:
ကျေးဇူးကြီးပေ့ ဒို့- ဖေဖေ ( ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ အဖေများနေ့အတွက် အမှတ်တရကဗျာ )
စားဝတ်နေရေး ပညာရေး ကျမ္မာရေးနဲ့
အဲဒါတွေကို တစ်ယောက်တည်းအားနဲ့ ဖွေရှာပေးခဲ့သူပါ....အဖေ။
မောတယ် ပန်းတယ် စိတ်ဝယ်မထားပဲ
ငါ့သား ငါ့သမီး ဝတ်ဖို့ဆင်ဖို့ကိုပါ
ဟင်းကောင်း ထ္မင်းကောင်း မချက်တာကြာရင်
သား- သမီးများနဲ့ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး
ငါ့သား- ငါ့သမီး ပွဲလမ်းသဘင် သွားလာတဲ့ခါ
သားနဲ့ သမီး ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စကား
ဗဟုသုတ ရစေမယ့် အတွေးအမြင်တွေကိုလည်း
အားလပ်တဲ့ စနေ- တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဆို
မမောနိူင် မပန်းနိူင် ပြောပြတတ်တဲ့....တို့ဖေဖေ။
ငုံမိသဲကိုင် တက်နိူင်ဖျားရောက် တဲ့
ပထမ အရင်စဉ်းစား ပြီးတော့
မှားမှန်းသိရင် ချက်ခြင်းရပ်လိုက်ပါ လူလေး...တဲ့
တရားသေ ဝါဒ ဘယ်တော့မှ ဆုပ်ကိုင်မထားနဲ့ ဆိုတဲ့
ပြန်လည်ကြားယောင် မြင်လာတဲ့ ညညတွေဆို
စစ်ကနဲမည်အောင် ကြေကြေကွဲကွဲ ရင်ထဲနာကျင်
ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဖေ့ဖေ့စကား၊
ကံစီမံရာကို မလှန်နိူင်ပေမယ့် ကံကိုတော့ အားမကိုးနဲ့
မိမိကိုယ်သာ မိမိကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရာဆိုတဲ့
တခုတော့ နောက်ဆုံးမှာလိုက်မယ်တဲ့ ငါ့- သားနဲ့ သမီးတို့
လူယုံသတ်လို့ ဘယ်တော့မှ အသေမခံနဲ့
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူတွေကို ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းပါ ဆိုတဲ့
ဖေ့ဖေ့စကား သား- သတိရလိုက်တာ...ဗျာ။
လမ်းထိပ့်ဆိုင်က ခေါက်ဆွဲကျော်တွေ ဝယ်လာတတ်တဲ့
သတိမယှဉ်တွဲ ဝေဒနာတွေမစဲတဲ့ အဲဒီညဆို
သြော်..... ကျေးဇူးကြီးပေ့ တို့ဖေဖေ..။
ကျေးဇူးရှင် ဖခင်များအား ဤ- ကဗျာဖြင့် ကန်တော့လိုက်ပါသည်။
on Sunday, June 17, 2012 at 8:36am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:48 AM No comments:
သူ... သည်ခရီးကို ထွက်ခွာခဲ့ပြီပေါ့...။
အမည်ခံ တိုင်းပြည် ဒို့ပြည်မှာ
ကမ္ဘာ့မှာ မြန်မာ ဟေ့လို့
သူ... သည်ခရီးကို ထွက်ခွာခဲ့ပြီပေါ့....။
သူ..ကြိုးပမ်းဖို့ သူ..သည်ခရီးကို ထွက်ခွာခဲ့ပြီပေါ့...။
အတ္တဂုဏ် မာန်မာန အစွဲမထား
ဇွဲနဲ့ ဝီရိယကို ဖွားဘက်တော်လို အားကိုးရင်း
ပြည်သူ ပြည်သားတို့ တိုးတက်ရေးအတွက်
သူ... ကြိုးပမ်းလို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးထွက်ခဲ့ပြီပေါ့...။
Venpunna Vamsa on Sunday, June 17, 2012 at 2:48am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:12 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုလက်ခံခြင်း အထိမ်းအမှတ်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက် များရုပ်သံ အပြည့်အစုံ..။
7Day News Journal on Sunday, June 17, 2012
သတင်း7Day Journal
Photo,s Reuters, AP, AFP
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:02 AM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ နိုဘယ်လ်မိန့်ခွန်း မူရင်းပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ကြားခဲ့တဲ့
Nobelprize-org Official Website of the Nobel Prize မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
Ultimately our aim should be to createaworld free from the displaced, the homeless and the hopeless,aworld of which each and every corner isatrue sanctuary where the inhabitants will have the freedom and the capacity to live in peace. Every thought, every word, and every action that adds to the positive and the wholesome isacontribution to peace. Each and every one of us is capable of making suchacontribution. Let us join hands to try to createapeaceful world where we can sleep in security and wake in happiness
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:14 AM No comments:
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံ .. မိန့်ခွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာနံပါတ်တစ် သတင်းဖြစ်နေ
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံမိန့်ခွန်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
နော်ဝေနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိခဲ့ခြင်းအတွက် မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုကို နိုဘယ်လ်ဆု ချီးမြှင့်ရေး ကော်မတီ ၏၀က်ဆိုဒ်ဖြစ်သော http://www.nobelprize.org/ တွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း မပြောကြားမီ တေးရေး ဆရာ အောင်လင်း၏ မေတ္တာရွှေစောင်း သီချင်းကို မြန်မာအမျိုးသား တစ်ဦးက မြန်မာ့ရိုးရာ စောင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၆ရက် မြန်မာ စံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီခန့်တွင် စတင် ပြောကြားသော အဆိုပါ မိန့်ခွန်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျော်လျက် ရှိကြကြောင်း နော်ဝေ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ နော်ဝေနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ခရီးပန်းခြင်းနှင့် လေယာဉ်ခရီးကိုကြာမြင့်စွာ စီးနင်းခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ ဂျနီဗာ ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အနည်းငယ် အော့အန်သည့် ဝေဒနာ ခံစားခဲ့ရကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေအိမ်အကျယ် ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံနေရစဉ်၁၉၉၁ ခုနှစ်က နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စား အဆိုပါဆုကို ၄င်း၏သားဖြစ်သူနှစ်ဦးက လက်ခံရယူခဲ့သည်။
၄င်း၏ခရီးစဉ်တွင် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ကြိုဆိုဆက်ဆံပုံများကြောင့် လက်ရှိမြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ၄င်းကို ဖိနှိပ်မှုများ ထပ်မံပြုလုပ်လာနိုင်ပါသလား ဟူသော မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်မည်ဟု မယူဆကြောင်း၊ စိုးရိမ်မည်ဟုလည်း မထင်ကြောင်း၊ မိမိတို့သည် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ထိခိုက်သည့်ကိစ္စများကို မိမိတို့လုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု CNN သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Daw ASSK Novel Prize from kotunwai on Vimeo.
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:58 AM No comments:
ဒီမိုကရေစီ အစစ်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆြို...
ကျေးဇူးကြီးပေ့ ဒို့- ဖေဖေ ( ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ အဖေမျာ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိ...
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံ .. မိန့်ခွန်း ဒေါ်အောင...